प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारी कुन दलमा कति? – Etajakhabar
प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारी कुन दलमा कति?
काठमाडौं : प्रदेश नम्बर २ का स्थानीय निकायका प्रमुख पदमा महिला उम्मेदवारी न्यून परेको छ । प्रमुख राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रदेखि मधेसकेन्द्रित क्षेत्रीय दल राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरमलगायतले महिलालाई प्रमुख पदमा न्यून उम्मेदवार उठाएका छन् । उनीहरूले महिलालाई हम्मेसी प्रमुख पदमा ‘टिकट’ दिएका छैनन् भने दिनै पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र त्यस्तो उम्मेदवारी दिएको देखिएको छ ।राज्यका हरेक निकायमा महिला सहभागिताको विषयमा वकालत गर्दै आएका नेत्री आफैंले स्थानीय तहको ‘टिकट वितरण’ को अधिकार पाउँदासमेत प्रमुख पदमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रानी शर्मा महिला सहभागिताको पक्षमा वकालत गर्दै आइरहेकी नेत्री हुन् । उनी आफैं महोत्तरीमा राजापाको टिकट वितरण कमिटीमा थिइन् । तर, उनले महोत्तरीको १५ वटा स्थानीय तहमध्ये कुनैमा पनि महिलालाई प्रमुख पदमा टिकट दिलाउन सकिनन् ।
‘मधेसमा प्रमुख पद पुरुषलाई र त्यसपछिको पद (उपप्रमुख÷उपाध्यक्ष) महिलाका लागि छुट्ट्याइएको भन्ने गलत म्यासेज गएको रहेछ, त्यसैले गर्दा पनि कुनै पनि महिला प्रमुख पदमा टिकटका लागि दाबी गरेर आउँदै आउनुभएन,’ नेत्री शर्माले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘जसले गर्दा मैले महिलालाई प्रमुख पदमा टिकट दिन खोजे पनि दिलाउन सकिनँ ।’
हरेक राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमध्ये एकमा महिलालाई अनिवार्य उम्मेदवार बनाउनै पर्ने निर्वाचन कानुनमै बाध्यकारी व्यवस्था छ । त्यही कानुनका आधारमा उपाध्यक्ष÷उपप्रमुख मात्रै महिलाले टिकट पाएका छन् । तर, यसको व्याख्या र बुझाइमै मधेसमा समस्या देखिएका कारण महिलाले प्रमुख पदमा ‘टिकट’ नपाएको शर्माको बुझाइ छ । अन्नपूर्णपोष्टले छापेको छ ।
‘निर्वाचन कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम प्रावधानको बुझाइमै समस्या छ, महिलालाई उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पद छुट्ट्याइएको र प्रमुख पद भने पुरुषले मात्रै उठ्नुपर्ने भन्ने मनोविज्ञानले मधेसमा काम गरेको मैले पाएँ’, शर्माले भनिन् । महिलाले राज्यका हरेक निकायमा समान सहभागिता र पहुँचको माग उठाउँदै आएको लामो समय भइसकेको छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी हेर्दा प्रमुख पदमा महिला सहभागिता उपेक्षित अवस्थामा रहेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र २५, २०७४ समय: ७:५६:३२